Elementor: Anonakidza Mupepeti weKugadzira Akanaka WordPress Mapeji uye Zvinyorwa | Martech Zone
Mugovera, October 17, 2020 Chitatu, December 23, 2020 Douglas Karr
Masikati ano, ndatora maawa mashoma ndikavaka yangu yekutanga mutengi saiti ndichishandisa Elementor. Kana iwe uri muindasitiri yeWordPress, iwe ungangodaro watonzwa iyo buzz nezve Elementor, ivo vangobaya 2 mamirioni kuiswa! Shamwari yangu Andrew, uyo anoshanda Vakabatana veNetGain, akandiudza nezve plugin uye ini ndatotenga risingagumi rezinesi kuti riite kwese kwese!
WordPress yanga ichinzwa kupisa pane yayo mashoma barbaric kugadzirisa kugona. Ivo vachangobva kuvandudzwa kuna Gutenberg, mupepeti webhokisi-repamhepo anopa kumwe kushanda kwekuwedzera… asi haisiyo padyo nedzimwe nzira dzakabhadharwa pamusika. Mukutendeseka kose, ndinovimba vanongotenga rimwe remapulagi epamberi.
Kwemakore mashoma apfuura, ndanga ndichishandisa Avada kune vese vatengi vangu. Dingindira rakagadzirwa zvine mutsindo, uchishandisa mubatanidzwa wezvose zviri zviviri theme uye plugin kuchengetedza fomati kugona. Zvese zviri zviviri zvinotsigirwa-zvakanaka uye zvine zvimwe zvinonakidza zvinhu zvaimboda budiriro kana kutenga.
Elementor zvakasiyana nekuti ingori plugin uye inogona kushanda zvisina musono nechero chero theme. Pane saiti yandakavakira uyu mutengi nhasi, ini ndangoshandisa base theme iyo yakakurudzirwa neve Elementor timu, iyo Elementor Mhoro Musoro.
Ini ndakakwanisa kuvaka inoteerera inoteerera saiti ine inonamira mamenu, tsoka tsoka, akafanirwa kumhara mapeji, uye fomu fomu ... kunze kwebhokisi. Izvo zvakatora zvishoma kujaira kuhukuru hweElementor, asi kana ndangonzwisisa iyo templating, chikamu chikamu, uye zvinhu, ndakakwanisa kudhonza uye kudonhedza saiti yese mukati memaminetsi mashoma. Yakandiponesa mazuva enguva uye ini ndaisafanirwa kugadzirisa tambo imwe chete yekodhi kana CSS!
WordPress Popup Kuburitsa Mitemo uye Dhizaini
Haisi kazhinji plugin inouya neakadaro kugona kugona, asi neElementor, unogona kuseta mamiriro, zvinokonzeresa, uye nemitemo yepamberi yekuti iwe unoda sei popups kutsikisa… zvese zviri nyore interface:
Iyo dhizaini inoshamisa, uye ivo vanotopa zvimwe zvisiri-pasherufu mienzaniso yekuti iwe ugadzire!
Mukuwedzera kune iyo Popup Kushanda, Kushambadzira Zvimiro Zvinosanganisira
Action Links - Batanidza zvirinyore nevateereri vako kuburikidza neWhatsApp, Waze, Google Calendar & nezvimwe zvirongwa
Kuverenga Widget - Wedzera pfungwa yekukurumidzira nekuwedzera iyo yekuverengera nguva kune yako yekupa.
Fomu Widget - Sala zvakanaka backend! Gadzira mafomu ako ese ararame, chaipo kubva kune Elementor mupepeti.
Kumhara Mapeji -Kugadzira uye kugadzirisa kumhara mapeji hakuna kumbove kuri nyore, zvese mukati mezvino WordPress webhusaiti.
Kuyera Nyeredzi Widget - Wedzera humwe humbowo hwemagariro kune yako webhusaiti nekuisanganisira nyeredzi chiyero uye nekuchitaira kune chaunoda.
Chipupuriro Carousel Widget - Wedzera bhizinesi rako 'humbowo hwemagariro nekuwedzera inotenderera yechipupuriro carousel yeako anonyanya kutsigira vatengi.
Haisi yakakwana plugin, zvakadaro. Ini ndamhanyira mune zvishoma zvausingakwanise kunzwisisa:
Tsika Post Mhando - Kunyange iwe uchikwanisa kuve neCustom Post Mhando pane yako Elementor saiti, iwe haugone kushandisa iyo Elementor Edhi kutara iwo eposita marudzi. Imwe yekushandira yeiyi kushandisa maposta zvikamu kudzora saiti mukati mese.
Blog Archive - Kunyange iwe uchikwanisa kugadzira yakanaka blog yekuchengetedza peji neElementor, haugone kunongedza kune iro peji mune ako WordPress marongero! Kana ukadaro, peji rako reElementor richaputsa. Iyi inyaya isinganzwisisike zvekuti zvakanditorera maawa kuti ndizvizive. Pandakangomisa iyo blog peji kune hapana, zvese zvakashanda zvakanaka. Iyo ndiyo bummer, asi nekuti iyo blog peji kurongwa inoshandiswa mukati mehuwandu hweWordPress template mabasa. Izvo hazvisi kuzodzivisa saiti yako neimwe nzira, ingori nyaya isinganzwisisike.
Lightbox Tsigiro - Iyo popup ficha yakanaka kutonhorera, asi kugona kwekungova bhatani kuvhura lightbox kuti uone gallery kana vhidhiyo isipo. Nekudaro, pane inonakidza Zvakakosha Kuwedzera-On iyo inopa ino ficha pamwe nedzimwe dzakawanda.
Kana iwe wakamboronga kusanganiswa muWordPress, iwe unoziva kuti zvingave zvakaoma sei. Zvakanaka, Elementor akafanogadzira kusangana pamwe neMailchimp, ActiveCampaign, ConvertKit, Campaign Monitor, Hubspot, Zapier, donReach, Drip, GetResponse, Adobe TypeKit, reCAPTCHA, Facebook SDK, MailerLite, Slack, uye Discord!
Wona Zvese Elementor Zvimiro
Kuwedzera Elementor Nezvimwe Zvimiro!
Yekupedzisira Addons raibhurari iri kukura yezvokwadi yekugadzira uye yakasarudzika Elementor majeti anovhura iyo nyowani nyowani mhando yezvigadziriso mikana kwauri. Iyi pasuru inoshamisa inosanganisira:
Widgets & Extensions - Raibhurari iri kukura ye40+ yakasarudzika Elementor widgets iyo inotora yako dhizaini kugona kune iyo nyowani nhanho!
Webhusaiti Matemplate - Pamusoro pe100 yakanyanya kugadziriswa uye inoonekera inoshamisa webhusaiti matemplate ayo anomhanyisa kufamba kwako.
Chikamu Zvidhinha - Anopfuura mazana maviri pre-akavakwa echikamu mabhuroko anongodhonzwa, akadonhedzwa, uye akagadzirwa, achipa peji rako rakasarudzika dhizaini mune mashoma mashoma.
Kunyangwe iwe uri dhizaini dhizaini kana mutsva, iwe uchakurumidzisa kufamba kwako uye uwane zvakasarudzika dhizaini nekuzara kwakakwana.
Kuzivisa: Ndiri kuzvikudza ndichishandisa mahukama ehukama mune ino chinyorwa!
Tags: elementorelementor yekuwedzera-onselementor peji matemplateelementor majetiinozivikanwa wordpress pluginWordpress mupepetiWordpress peji dhizainiWordpress peji mupepetiWordpress plugin